‘पाँच बर्ष पछि दाईलाई टिका लगाइदिदै छु’ – Nepali Health
न चंङ्गा उड्छ न देउसी भैलो, तिहार त मलाई पहिले कै रमाइलो
२०७५ कार्तिक २२ गते १४:०२ मा प्रकाशित
डा. श्वेता नकर्मी, बाथरोग विशेषज्ञ – नेशनल बाथरोग सेन्टर रातोपुल
पाँच वर्ष पछि दाईलाई टिका लगाइदिदै छु । त्यसकारण पनि यसपटक मेरो तिहार स्पेशल छ । आमा बाबुका हामी दुई सन्तान, एक जना दाई अनि म । विगतमा तिहारमा दाई पनि देश बाहिर बस्ने र म पनि पढाईका लागि देश बाहिर भएकाले भाइटिकामा सहभागी हुन पाएका थिएनौँ । यसपटक चाँही दाई पनि आउनु भएको छ ।
तिहारका पाँचवटै दिन विशेष छन्, महत्वका छन् । त्यसबाहेक हामी नेवार समुदायको म्हः पूजा र नयाँ बर्ष नेपाल सम्वत पनि यहि बेला पर्छ । यसैले पर्वको रौनकता अझ थपिएको हुन्छ । हामी आज गोवर्धन पुजाका दिन म्हः पूजा गर्दछौँ । खासमा यो आफैले आफैलाई पुजा गर्ने संस्कृति हो । आजैबाट नेपाल सम्वत शुरु भएको छ । आजको दिन हामीले पुजा गरिसकेपछि समयबजी खाने चलन छ । खासमा हाम्रो परिवार शाकहारी छ । त्यसैले घरमा पाक्ने परिकार पनि त्यहि खालको हुन्छ ।
चिकित्सक भएको नाताले बिरामी हेर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य हो । त्यसका लागि हामी जुनसुकै बेला अवस्थामा तयार नै हुनुपर्छ तर यसपटक मैले हिजो लक्ष्मीपुजाको दिनबाट विदा लिएको छु । अरु डाक्टरले मेरो काम गर्नुहुन्छ । हामी पालो गरेर विरामी हेर्ने व्यवस्था मिलाएको छौँ ।
मेरो बिचारमा चाडपर्व सानो बेलाकै राम्रो । त्यसबेला आफ्नै मौलिकता थियो । अहिले त्यो मौलिकता छैन । सानोमा म पनि साथी भाईसंग भैलो खेल्न जान्थे । अहिले त्यस्तो छैन । देउसी भैलो अलि बढी कर्मसियलाइजेसन भएको हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो । पहिले पहिले चंगा उडाउने चलन थियो । अहिले त्यो पनि देखिदैन ।
टिका पछि दाजु बहिनीले टिका लगाएर दक्षिणा उपहार लिने दिने चलन त छ नै त्यो भन्दा पनि दाजु बहिनीको माया स्नेह, आशीर्वाद ठूलो कुरा हो जस्तो लाग्छ । उपहार र दक्षिणाको कुरा अहिले नै खुलाउन अलि नमिल्ला कि ?….( हासो )
‘बहिनीलाई दिने दक्षिणा खाम भित्र हुन्छ भन्न मिल्दैन’